Hurumende yeZimbabwe pamwe nemapato anopikisa zvakorokotedza mutungamiri mutsva weAmerica, VaJoe Biden, pamwe nemutevedzeri wavo, naAmai Kamala Haris ,nekutora mhiko kwavaita mushure mekukunda musarudzo dzakaitwa muna Mbudzi gore rapera.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira hurumende yaVaBiden remangwana rakanaka uye vati Zimbabwe inoda chose kugadzirisa hukama hwayo nenyika dzepasi rose kusanganisira United States.
VaMangwana vati kuzara kwemauto muWashington kwange kwakanangana nekuchetedza runyararo uye zvinhu zvakadai hazvifanri kutsoropodzwa kana zviichitwa nedzimwe nyika.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa muMDC Alliance, Muzvare Gladys Hlatswayo, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kudzidza kubva kuAmerica kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo vachiti kunyange hazvo VaTrump vakaedza kusandura zvakabuda musarudzo, mapazi ehurumende anosanganisira paramende nematare edzimhosva akamira semusambangwena achichengetdza zvido zvevanhu kusvikira nhasi apo VaBiden vagadzwa semutungamiriri wenyika.
Vati vanoshuvira VaBiden naAmai Haris zvakanaka vachiti vanotarisira kuti hurumende yavoichatora matanho ekuumbiridza hutongo hwejekerere, kodzero dzevanhu, kushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurwisana nedenda reCovid-19 iro ranetsa pasi rese.
Mutaurirri webato reMDC T, VaWitness Dube, vaudza Studio 7 kuti vanotambira kugadzwa kwaVaBiden naAmai Haris vachiti tariro yavo ndeyekuti vachava nemuona wakakasiyana nehurumende dzapfuura pahukama weAmerica neZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University, VaJoel Mukusha, vati kunyange hazvo America yave nehurumende itsva, hapana zvakawanda zvavangatarisira kubva kuna VaBiden nekuti America yagara ine gwara rainotevedza pakudyidzana nedzimwe nyika.
Zvichakadai Zimbabwe Women Parliamentary Caucus yakorokotedza Amai Harris nekugdzwa semutevedzeri wemutungamiriri weAmerica.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano iri, Amai Sibusisiwe Bhudha Masara, vati zvaitika muAmerica zvinopa madzimai shungu dzekutora zvigaro zvehutungamiriri.
Amai Harris vaita mudzimai wekutanga weAmerica, kugadzwa semutevdzeri wemutungamiri wenyika.